Description/subject: 前言 缅甸是亚太地区重要的木材生产国和出口国，在国际市场上，其出口的 珍贵木材，如柚木和其他硬木 ， 也 颇具盛名 。缅甸保有亚洲仅存的几片天然 林，这些森林 不但 维持着当地社区的生计，对该区域的生态系统也至关重 要。在经历了几十 年的军事统治和政治改革后，利益相关者正在讨论缅甸林 业部门的未来 ， 如何在发展经济的同时，平衡保护目标？中国与缅甸 接壤 ， 并通过贸易和投资对缅甸产生巨大影响。中国的态度，对于缅甸林业部门的 未来有着巨大的影响。 ..... Abstract: "This policy brief analyzes recent trends in the timber products trade between China and Myanmar, using Chinese customs data from 2000 through 2013. Timber is one of the primary commodities traded between the two countries, providing significant revenue to Myanmar’s central government and ethnic political armed opposition groups, while supplying China with materials to feed its growing wood manufacturing sector. In 2013, timber product exports from Myanmar to China reached an all-time high by both volume and value, with 94% of these exports (by volume) registered by Chinese customs in Kunming, near the Myanmar border. Both countries banned cross-border timber trade in 2006, so these findings suggest high levels of illegality. Representatives from both countries plan to meet in March 2015 to discuss these issues further, and to develop strategies to promoteatimber trade that is legal, beneficial to both nations, and sustainable in the long term."
Description/subject: "... This paper attempts to analyse the key aspects of reforms required to ‘democratise’ Myanmar's timber trade, and the political–economic interests contributing or obstructing reform. The main aim of this paper is to assess the prospects for reform of Myanmar's timber sector in light of theemerging FLEGT process, and to applyapolitical ecological analysis to the ways in which the political–economic power balance will determine the outcomes. We use aspects of political–ecological analysis to understand the nature and dynamics of the contested reform process: firstly structural explanations for the ways in which different groups gain access to resources — in this case forests and timber, andwho gains and loses through these processes; and secondly,acritical analysis of how polices relate to the exercise of power and practices on the ground. (Springate-Baginski and Blaikie, 2007: 10). Methodologically, the often opaque and generally illicit nature of Myanmar's present timber trade makes primary data collection extremely difficult, even hazardous. There is also limited government data, and what there is, is systematically misleading (EIA, 2014). Therefore for this overview paper we necessarily rely on secondary sources and anonymous interviews (conducted in Spring 2013), along with the personal experience of the authors. To help clarify the complex and fluid contemporary situation this first section sets out the overall political and historical context of Myanmar's timber trade..."
Description/subject: သုံးသပ်ချက်အကျဉ်းချုပ် - မြန်မာအစိုးရ၏ လတ်တလော ပုံနှိပ်ထုတ်ပြန်လိုက်သော လွန်ခဲ့သော ၁၅နှစ်အတွင်း သစ်လုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့် သစ်တင်ပို့မှု စာရင်းဇယားများ၏ ဖော်ပြချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍မှတ်တမ်းတင်ထားသော ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုများထက် သိသိသာသာပင် လျော့နည်းနေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ထိုသစ်လုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနှင့် ခြစားမှုများလွှမ်းမိုးနေကြောင်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (EIA) ၏ သုသေသနပြုချက်က ထုတ်ဖော်လိုက်သည်။ - ၂၀၀၁-၁၃ခုနှစ်အတွင်း သစ်လုံးတင်ပို့မှုနှင့် ပတ်သက်သော တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့် ပမာဏသည် မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍မှတ်တမ်းတင်ထားသော နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုများအားလုံး၏ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ရှိပြီး ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းသော သစ်တင်ပို့မှုများမှာ တရားမ၀င်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေသည်။ - ၂၀၀၁-၁၃ခုနှစ်အတွင်း အစိုးရခွင့်ပြုသော တရားဝင်သစ်ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏသည် မြန်မာနိုင်ငံထံမှ သစ်လုံးတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပမာဏ၏ ၅၃ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး နိုင်ငံအတွင်းတွင် သစ်လုံးတင်ပို့ရေးဦးတည်ပြုလုပ်သော တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ - ၂၀၀၁-၁၃ခုနှစ်အတွင်း တရားဝင်ခွင့်ပြုမထားသော၊ မှတ်တမ်းတင်မထားသော သစ်လုံးတင်ပို့မှုပမာဏသည် ၁၆.၅သန်း ကုဗမီတာရှိကာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၇ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ၏။ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (EIA) ၏ တွေ့ရှိချက်များသည် မြန်မာအစိုးရ၏ သစ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုများ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပျက်ကွက်နေသည်ကို ဖော်ပြနေ၏။ သစ်တောအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျားနှင့် အခြားသော နိုင်ငံများပါဝင်သော ဥပဒေရေးရာများနှင့်ပတ်သက်၍ အထိအခိုက်မခံသည့် ပွားများလာသော တန်ဖိုးမြင့်ပေးမည့်ဈေးကွက်များတွင် မြန်မာသစ်လုံးတင်ပို့မှုများ ရောက်ရှိရေးအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်နေ၏။